Cunto: Waa Maxay Faafaahin Dheeraad ah?
aragtida ganacsiga iyo xirfadaha farsamaynta raadinta mashiinka. Soo saaraha Webka waa mid ka mid ah qalabka xayeysiinta shabakadaha ugu sarreeya ee loo isticmaalo in lagu soo saaro xogta iyo diiwaanka diiwaanka sida sawirada iyo qoraallada bogagga shabakadda. Webmasters iyo la-taliyayaasha suuq-geynta ayaa doorbidaya isticmaalka faylasha faylasha bogga ah sida geeddi-socodka uma baahna wax barnaamij ah.
Websaydh bixiyuhu wuxuu siinayaa suuqyadda internetka fursad ay ku bedelaan nuxurka qaabab kala duwan. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray barnaamijyo qaali ah iyo software waqti-qaadashada ah si loo soo saaro faylasha diiwaanka bogagga shabakadda. Soo saaraha feylayaasha bogagga ayaa ku habboon baahida iyo qeexitaanada ay soo bandhigeen macaamiisha.
Sidee bogga internetka loo soo saaro
Faylasha mareegaha bogga ayaa si ballaaran loo adeegsadaa suuqyadaba waxqabadyada internet-ka iyo kuwa gudaha ahba. Miyaad webmaster ka shaqeyneysaa inaad bixiso waxyaabo badan oo aad fiirisid dhegeystayaashaada? Soo saaraha shabakadu waa xalka ugu fiican ee ololehaaga internetka.
Hagaajinta aragtidaada ganacsiga, falanqaynta faahfaahinta alaabta, iyo garaacida suuqa aad dooratay maaha mid sahlan. Siinta bixiyaha feylka ee bogga wuxuu kuu dhigayaa meel aad u fiican si aad u wado gaadiidka dhabta ah ee boggaaga. Halkan waxaa ah tallaabooyin degdeg ah oo ku saabsan sida loo abuuro mashruuc mashruuc faa'iido leh.
Soo saarista xogta kaydka
Ka dib marka laga soo saaro macluumaadka bogagga kale ee internetka, tixgelin natiijooyinka kaydinta faylasha diiwaanka sida MySQL. Waxaad sidoo kale ku soo gudbin kartaa xogta la soo celiyay bogagga kale ee loogu talagalay tixraaca mustaqbalka.
Cadaynta qaabka xogtaada
Ka dib markii la ogaado goobta,
Macluumaadka tooska ah ee shabakada ku salaysan
Halkan, soo saaraha feylka ee bogga wuxuu isticmaalaa URL-yada loo cayimay oo soo saara macluumaadka ku salaysan xogta
Taageerada online-ka ah ee saacadaha buuxa
Inay noqoto mid ka mid ah ka soo saarayaasha bogga shabakadda, shabakadda Extractor waxay bixisaa caawimaad internetka oo dhamaystiran oo macaamiisha ah. Isticmaalidda tikidhada, waxaad tixgelisaa inaad la tashatid shaqaalaha taageerada internetka waqti kasta oo ka mid ah maalintaas. Isticmaalka tikidhada ayaa si weyn loogu doodayaa in lala socdo la-talinta dibna xaliyo dhibaatooyinka si joogto ah
Maxaad u isticmaashaa Web Extractor
) Noocyada ay bixiyaan khariidadaha webka ayaa go'aaminaya tayada feylka feylka ah ee ay bixiyaan kuwa soo saarey uld waxay soo ururiyaan xog qiimo leh sida sharaxaadda alaabta, qiimaha qiimaha, iyo sawirada tayada waqtiga dhabta ah. Halkaan waxaa ah adeegyo kale oo muhiim ah oo ay bixiyaan shabakadaha faylasha ee bogga.
Ururada dib-u-eegista iyo qiimooyinka waxsoosaarka
Websaytka East Extractor ayaa soo gala macluumaad qiimo leh sida sharaxaadda alaabta, dib u eegista filinka iyo qiimeynta, iyo qiimaha alaabta ee shabakadda e-commerce.
Qaadashada waxyaabaha kooban
Suuq-geynta, kor u qaadista ka-faa'iideysiga ugu dambeeya ee adeegga ayaa ah midka ugu muhiimsan. Kordhinta adeegsadahaaga isticmaalkeeda 'engagementers'.
Soo saarida macluumaadka kaydka ee suuqyada
Sida webmaster, macluumaad cusub oo ku saabsan suuqyada hadda jira waa mid muhiim ah. Faylasha mareegaha bogagga 'waxay sii haysaa baraha iyo iibiyeyaasha' illaa iyo taariikhda suuqyada suuqyada.
Hantida shabakadda waa qalab wax ka jaraya oo ka caawiya suuqgaynta in ay soo saaraan sawirada iyo feylasha laga helo bogagga internetka e-commerce. Isticmaal feylahan feylka ah ee bogga si aad u tiriso macluumaadka liiska ku qoran oo u adeegso xogta labadaba shabakadaha internet-ka iyo kuwa internetka Source .